Imivamisa ye-Varicose, noma imivimbo ye-varicose, isifo esibi kakhulu. Kungenxa yakhe ukuthi abesifazane abaningi abakwazi ukugqoka i skirt noma swimsuit ogwini, futhi baphoqeleka ukufihla imilenze yabo ngaphansi kwezingubo zabo. Ngokwezibalo, i-varicose ivela kuma-20% wabantu, futhi ikakhulukazi lesi sifo sithinta abesifazane. Ngakho-ke, ake sikhulume namhlanje ngemivimbo ye-varicose: yikuphi, izimbangela zalokho okukhona, izimpawu nokuvimbela.
Ukuze uqonde kangcono indlela yokugwema imivimbo ye-varicose, udinga ukuqonda ukuthi kwenzeka kanjani? Ngakho-ke, i-anatomy encane. Igazi liya emilenzeni emithanjeni, futhi lihamba ngokushesha - inhliziyo yakhe iyamqhuba. Uma ifika ezitsheni ezincane iyancipha, bese iqoqa emithanjeni iphinde ibuyele enhliziyweni. Kodwa igazi lihamba kanjani? Yini emqhubelayo? Kuvela ukuthi imithanjeni ngokwazo, ephakathi kwe-tonus, iphoqa igazi emuva enhliziyweni. Futhi kusiza ukugqugquzela igazi kuze kube yimisebenzi yemisipha. Ngakho-ke, nge-veicic veins, ithoni yemifudlana iphansi kakhulu, ngakho igazi lihlaselwa esikhundleni sokuthuthela enhliziyweni. Izindwangu zanda, ziqala ukugoqa bese zihamba ngaphezu kwesikhumba. Futhi, igazi liphuma emithanjeni, okudala ukuvuvukala kwemilenze. Ngokuvamile, imivimbo ye-varicose ivela emilenzeni, kodwa kukhona imivimbo ye-varicose ye-anus (i-hemorrhoids) ne-testicles (varicocele). Sizocabangela imivimbo ye-varicose emilenzeni.
Izimbangela zokuvela kwemivimbo ye-varicose:
- Ukuhlala noma ukuma emsebenzini kunomthelela ekuthuthukiseni imivimbo ye-varicose. Kulabo abashayeli, abathengisi, abaculi bezinwele, ngokuvamile abasizi bezinwele basesikhundleni esingenalutho, amakhulu akhuthaza ukuqhuma kwegazi emilenzeni, futhi kuyingozi kakhulu imivimbo ye-varicose;
- ngokuvamile imivimbo ye-varicose iyenzeka ngezinyawo ezinzima;
- futhi ubuholi budlala indima ebalulekile ekusenzeni imivimbo ye-varicose;
- Kwabesifazane, imbangela ye-veicic veins is pregnancy (ngenxa yomthwalo owengeziwe emilenzeni) futhi igqoke izithende eziphakeme;
- i-varicose ivame ukuvela kubantu abanesisindo esiningi, noma kubantu ababenomsebenzi wabo ohlobene nokuphakamisa imithwalo enzima;
Izimpawu zemivamisa ye-varicose:
- imivimbo ye-convex;
- ukuvuvukala njalo kwemilenze;
- ubunzima nobuhlungu emilenzeni;
- izinsalela zemisipha yamathole;
- ukuvuvukala endaweni yesikhumba;
Uma uzizwa izimpawu ezinjalo, qiniseka ukuthi uhlolwa!
Izindlela zokuvimbela imivimbo ye-varicose.
Ukuze ugweme imivimbo ye-varicose yenza ukuphila okujabulisayo. Hamba ukubhukuda, ugijima, ngebhayisikili. Esikhundleni sokukhuphuka izitebhisi. Ungahlali isikhathi eside endaweni eyodwa! Ngenxa yokungaqhubeki isikhathi eside, ukuvuvukala kwemilenze nokuqhuma kwegazi kungase kwenzeke. Futhi ubuke isisindo sakho: isisindo esiningi sinomthelela ekuthuthukiseni imivimbo ye-varicose.
Uma ufuna ukugwema imivimbo ye-varicose, uphuze okungenani ama-1.5 amalitha kagesi ngosuku, ukuze igazi lingabi yi-viscous futhi lihambe kalula emithanjeni. Gwema ukugqoka izinsimbi.
Khumbula ukuthi uma uhamba phambili, cishe cishe uzoba nemivuthu ye-varicose!
Amagundane omlenze: amakhambi abantu
Ukudambisa izinyawo namathiphu okusetshenziswa
Ukunakekela ekhaya ngezinyawo
Ukuqwashiswa kwe-Wax ekhaya
Izifo Zenhliziyo - I-Perpetual Motor
Inyanga yokuqala yokukhulelwa, izimpawu
Ngemuva kwesahlukaniso, uVadim Kazachenko washiya ngaphandle komsebenzi
Amakhekhe nge anyanisi aluhlaza
Ukusila umlomo wengane yakho
Ukubuyiselwa koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo ekugeza
Izinqola ezinhlanu zokugqoka ezibonakala zikhulisa imilenze yakho